မကြာခင်ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ့် realme7Series အကြောင်း — Anycall Mobile
By liam October 17, 20203Mins Read
realme အနေနဲ့ အရင် စက်တင်ဘာလလောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ Mid-range series အသစ်ဖြစ်တဲ့ realme7series အသစ်ကို India မှာမိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီ realme7series ဟာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ realme ရဲ့ Official Facebook Page ကနေတရား၀င်ကြေညာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ realme7series ထဲမှာ Realme7၊ Realme7Pro စတဲ့ဖုန်းနှစ်လုံးပါဝင်ထားပါတယ်။
ဆိုတော့ ဖုန်းတွေမှာဘယ်လို အလန်းစား Specs တွေပါလာလဲ??
realme7မှာ 6.5-inch IPS LCD panel ကိုပဲသုံးပေးထားပြီး realme7Pro မှာတော့ 6.4-inch Super AMOLED display ကိုသုံးပေးပါတယ်။ Refresh rate မှာတော့ realme7မှာ 90Hz refresh rate နဲ့ relalme7pro မှာတော့ ပုံမှန် 60hz Refresh Rate ကိုပဲထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
သူရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖုန်းတွေမှာတောင် 120Hz အထိသုံးပေးထားတာကို ဒီ realme7Pro မှာ 60Hz ပဲသုံးထားတာက ဇောဒက တက်ချင်စရာပါ။ ဆိုတော့ ပုံမှန် 60hz Refresh Rate နဲ့ AMOLED Display ကိုပဲရွေးမလား? ဒါမှမဟုတ် Refresh Rate များများနဲ့ LCD Display ကိုပဲရွေးမလား?? စဉ်းတော့စဉ်းစားစရာပါ…
Performance အတွက် realme7မှာ Mediatek ရဲ့ Gaming အသားပေး Chip အသစ်ဖြစ်တဲ့ Helio G95 နဲ့အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းဟာ Helio G95 ကိုပထမဆုံးသုံးထားတဲ့ ဖုန်းလို့ပြောရင်လည်းမှားပါဘူး။
Realme7Pro မှာတော့ realme6Pro မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 720G ကိုပဲဆက်သုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Chipset ကြီးကိုပဲဆက်သုံးပေးထားတာကတော့ အားမရစရာပါပဲ။ 765G လောက်ဆိုရင်တောင်ခံသာပါသေးတယ်။Software အတွက်တော့ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးမှာ Android 10 အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ realme UI နဲ့ run ပေးထားပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း realme UI 2.0 Update ကိုရလာတော့မှာပါ။
Camera မှာတော့ ဖုန်းနှစ်လုံးမှာ တူညီတဲ့ Quad Camera Setup ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Camera Setup ထဲမှာတော့ 64MP f/1.8 Main ၊ 8MP f/2.3 ultra-wide ၊ 2MP f/2.4 macro ၊ 2MP f/2.4 monochrome portrait စတဲ့ Camera လေးလုံးပါဝင်ထားပါတယ်။ Camera Features တွေအနေနဲ့ Starry Mode, Super Nightscape, HDR, AI scene recognition, UIS / UIS Max video stabilization, AI Color Portrait Video, Ultra Nightscape Video ၊ 120fps 1080p slow-motion video shooting နဲ့ 4K video shooting စတဲ့ Features တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
Selfie အတွက် Realme7Pro မှာ 32-megapixel selfie camera ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ သူ့မှာလည်း portrait bokeh, HDR, AI beautification, nightscape mode, 120fps slow-motion video recording နဲ့ 30fps video recording စတဲ့ Features တွေပါလာပါတယ်။
Realme7မှာတော့ 16-megapixel selfie camera ကိုပဲတပ်ဆင်ပေးလာပါတယ်။ Features တွေကတော့ Realme7Pro မှာပါတဲ့ Features တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။
နောက်ဆုံး Battery မှာ‌ေတာ့ Realme7မှာ 30W Dart Charge Technology ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 5,000 mAh Battery ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး realme7Pro မှာတော့ 65W SuperDart technology ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4,500mAh dual-cell battery ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ 65W SuperDart technology ကြောင့် 4,500 mAh Battery ကို ၃၄ မိနစ်အတွင်းမှာ အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ်လို့ realme ကဆိုထားပါတယ်။
Security အတွက် Realme7မှာ Side-Mounted Fingerprint ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Realme7Pro မှာတော့ Super AMOLED Display ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် In-screen fingerprint sensor ပါလာပါတယ်။တစ်ခြား Features တွေအနေနဲ့ dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 (Realme 7) and 5.1 (Pro), GPS, USB-C နဲ့ 3.5mm နားကြပ်ပေါက် တို့ပါလာပါတယ်။
6 GB RAM + 64 GB storage – Rs. 14,999 (~$204) (မြန်မာငွေ ၂ သိန်း ၈ သောင်းဝန်းကျင်)
8 GB RAM + 128 GB storage – Rs. 16,999 (~$231)( မြန်မာငွေ ၃ သိန်း ၁သောင်းဝန်းကျင်) နဲ့
6 GB RAM + 128 GB storage – Rs. 19,999 (~$273) ( မြန်မာငွေ ၃ သိန်း ၇ သောင်းဝန်းကျင်)
8 GB RAM + 128 GB storage – Rs. 21,999 (~$299) (မြန်မာငွေ ၄ သိန်း ဝန်းကျင်) ကျသင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်အနေနဲ့ကတော့ Mist White ၊ Mist Blue ဆိုပြီး နှစ်မျိုးဝယ်ယူလို့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတွေကိုတော့ realme ဘက်ကနေ ဒီလကုန်လောက်မှာ ဈေးကွက်ထဲကို တရား၀င်မိတ်ဆက်လာဖို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
(မှတ်ချက်အနေနဲ့ အပေါ်ကဈေးတွေဟာ ခန့်မှန်းခြေဈေးသာရှိသေးတဲ့အတွက် ဖုန်းရောက်လာတဲ့အခါ ဈေးကွာခြားမှုတွေရှိတာကိုတော့ သတိပြုစေချင်ပါတယ်)